Posted by ကလိုစေးထူး at 9:01 PM
ဖတ်ရတာတော့ နင့်ကနဲပဲ .. ခံစားရပါတယ်။
အရှိုးရာ တဲ့ လား...
ရိုက်ခဲ့သူနဲ့ အရိုက်ခံရသူမှာ နှစ်ဦးလုံးမှာတော့ ဒဏ်ရာကျန်နေစမြဲပါပဲ။
Oct 9, 2008, 9:15:00 PM
စိတ်ထိန်း ကိုကလိုစေးထူး။ စိတ်ထိန်း။ လောကကြီးက ဂလိုပဲဗျာ။ ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူလဲ “တိုက်ခိုက်ရမယ်“ဆိုတဲ့ လမ်းကိုလျှောက်နေတာပဲ။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်တာပဲ။ သိတ်ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ ဒါနဲ့ အရင်တပို့စ်က ကော်မန့်နဲလှပါလားဗျ။ သုတ၊ ရသမဟုတ်လို့ လက်ရှောင်နေကြတယ်ထင့်ပါ့။ လူတွေကို တချို့လူတွေ နားလည်တတ်ဖို့ကောင်းပြီဗျာ။
Oct 9, 2008, 9:16:00 PM
စိတ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်အောင် ထားပါ။
မြင့်မား မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားပါ။
ကိုယ်လုပ်သင့်တာလုပ်တာ၊ ကိုယ်ပြောသင့်လို့ ပြောတာဟာ စေတနာမမှားသရွေ့ အကျိုးရှိပါတယ်။
Oct 9, 2008, 10:51:00 PM
ကလိုစေးထူးရဲ့ ဘလော့ခ်ကို အမအမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်..
ခု ပို့စ်လေးကိုလည်းခံစားရတယ်..အမလည်း မြန်မာပြည်ကို near Thailand လို့မဖြေချင်တဲ့သူပါ..ပြီးတော့..ကိုယ့်မိခင်မြေကို အိပ်မက်တွေထဲမှာမျက်ရည်ဝိုးဝါးနဲ့ မပြန်ချင်တဲ့သူလေ..ဒီတော့ခေါင်းကိုမာနိုင်သရွေ့ ပေါ့..း(
Oct 9, 2008, 10:55:00 PM
ကိုကြီးရေ အားပေးလျက်ပါ တချိန်ချိန်မှာ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ကြရမှာပါ အကိုရေ
Oct 9, 2008, 11:05:00 PM
ကိုယ်လျှောက်တဲ့ လမ်းက မှန်နေရင်..
ပန်း တိုင် ဟာ ရှေ့ မှာ ရှိ စမြဲ.. ပဲ..
ယုံကြည်ချက်တွေေ၀၀ါး မသွား ဘို့ ပဲ လိုတယ်
အရှိုး ရာတွေကို .. ၀မ်းပမ်း တသာ နဲ့
တနေ့မှာ ရွှေ ကတ္တီပါ ၀တ်ရုံ အဖြစ် ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလို့..
Oct 10, 2008, 12:43:00 AM
အရှိုးရာ က ရင်ဘတ်ထဲထိအောင် နက်ရှိုင်း လွန်းတယ်ဗျာ....။
Oct 10, 2008, 1:05:00 AM
ကျနော်က အစ်ကိုဘာရေးရေး အားပေးနေတယ်လို့ ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်ရာ ကျအုံးမယ် ခံစားချက် အခံရှိသူတိုင်းအတွက်တော့ ကီဘုတ်ပေါ်က ရိုက်ချလိုက်တဲ့သူနဲ့ဖတ်နေတဲ့သူတွေက တစ်ထပ်တည်းပေါ့ဗျာ ဒီအကြောင်းကလည်းမပြောမပြီးလေ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာပဲ ဆိုက်ဆိုပေမယ့် ဘူတာကြီးမကောင်းတော့ မကောင်းဘူးပြောမှာပေါ့ ချိုမိုင်မိုင်တောင်ဝင်မကချင်တဲ့ အစ်ကို့ ကို ပွဲကြည့် ပိရိသတ်ဒီကောင်က ရှက်နေတယ်ဗျး) အားတင်းပြီး ဆက်လျှောက်ပါဗျို့ အနည်းဆုံးတော့ ကမ်းလင့်မယ့် လက်တစ်စုံကတော့ အသေချာကြီးကို ရှိနေမယ်ဆိုတာ .................။
Oct 10, 2008, 3:28:00 AM
ချစ်ကိုကြီးရေ... အားတင်းထားပါနော်.. အားလုံးတူတူ အရှိုးရာတွေနဲ့ပါ.. ကြီးတာငယ်တာ ကွာရင်ကွာမယ် ဒဏ်ရာကတော့ ဒဏ်ရာပါပဲလေ..
Oct 10, 2008, 5:34:00 AM
Oct 10, 2008, 6:41:00 AM
တစ်ခါ ကျွှန်တော် စင်္ကာပူက ပြန်လာတုန်း ဘယ်ကလည်း လို့ မေးခံရဘူးတယ်၊ မေးသူက ဂျပန်မ၊ ကျွှန်တော် ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတော့ ဘယ်နားကလဲ လို့ ထပ်မေးတယ်၊ ဒီတော့ မင်းတို့ ကျောင်းတွေက ပထ၀ီ သင်ကြားမှု ညံ့ပုံရတယ်။
ဦးသန့် ကိုသိလား? မသိဘူးတဲ့၊ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်ကိုရော သိလားလို့ စိတ်တိုတိုနဲ့ မေးတော့ ဟာ သိပ်သိတာပေါ့ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေ သိပ်လေးစားတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ပါ လို့ ပြောမှ.......
Oct 10, 2008, 8:19:00 AM
ကိုစေးထူး… အရှိုးရာတွေ တွေ့ ရတော့ ရင်ထဲမကောင်းဘူး… အပြုသဘောနဲ့ အပျက်သဘောက အတော်မြင်သာတော့ အပျက်သဘောတွေကို ဥပေက္ခာပြုကြည့်ပါလား… အင်း… ပြောတော့လွယ်တယ်နော်… ဒီရေးဟန်လေးကို ကြိုက်တယ်… ရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားတယ်….
Oct 10, 2008, 9:15:00 AM
Oct 10, 2008, 9:29:00 AM
ကောင်းလှချည်လားဗျာ :O ...။ “ဒိန်း” ကနဲကို ရင်ထဲရောက်တယ် နောင်ကြီး။ အားပေးလျက်ပါဗျာ။
Oct 10, 2008, 2:23:00 PM
ကိုစေးထူး အရေးအသားတွေ ပိုပြီး ပြောင်မြောက်လာတယ်။ ဘာတွေ ပြောပြော ဘာတွေ လုပ်လုပ် စေတနာမှန်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်လေ။
Oct 10, 2008, 10:56:00 PM
ပြန့် ကျဲ နေတဲ့အနုပညာတွေ ကအားကောင်း နေပါလိမ့်မယ်..
Oct 12, 2008, 1:54:00 AM
ထက် အောင် said...
လှေခွက်ချဉ်း ကျန် အလံ မလှဲ ဆိုသလိုပေါ....
တက်ကျိုးရင် လက်ထိုးလှော်မဲ. ဆိုတဲ. ခင်ဗျားလို ရဲဘော်မျိူး များများ လိုတယ်ဗျိူ....မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက်........
Oct 12, 2008, 6:42:00 AM
အပိုင်းအစတွေ...အပိုင်းအစတွေ လွင့်မြောနေ လိုက်တာ...။ အဲ့ဒီ့လွင့်မြောနေတဲ့ အပိုင်းအစ တွေကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကိုယ်တိုင်က အပိုင်းအစ တစ်ခုဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်..။ ကြိုးစားပမ်းစား ရက်လုပ်ထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ...။ အင်း... တစ်နေ့တော့ ပန်းတိုင်မှာ ဆုံကြကောင်းပါရဲ့...။
p.s- လက်က ဒဏ်ရာကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါအစ်ကို။ ဆောင်းဝင်ပြီ အနာရင်းနိုင်တယ်။
Oct 12, 2008, 5:00:00 PM
စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင် တခါတရံ မြန်မာဆိုတာ ဘယ်နားမှာလဲလို့အမေးခံရသေးတာဘဲ..
ကျွန်တော့်ကိုမေးတဲ့လူတိုင်းကိုတော့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် သန့် ကိုသိလား... နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသိလား လို့ပြန်မေးလိုက်တယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအစ်ကို ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေမျက်နှာမငယ်ရဖို့ စေတနာမှန်တဲ့လမ်းဖြစ်ရင်ရဲရဲ ဆက်လျှောက်ကြတာပေါ....့
Oct 13, 2008, 4:20:00 AM
where is Burma? နေ့တိုင်းကြုံနေကြမေးခွန်းလေးပါ ... ဒါပေမယ့်ဖြေတိုင်းမှာလဲ တစ်ထစ်ချင်းကျပ်လာတဲ့ရင်ကိုလဲခုထိဖြေလို့မရသေးပါဘူး။ခုထိကျင့်သားမရသေးပါဘူး။
Oct 15, 2008, 4:30:00 AM
အဲဒီအရှိုးရာကို ဘယ်အရာက မှ ပျောက်ပျက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး
Nov 8, 2008, 8:34:00 AM
KO Say Htoo
a shoe yar tway,, dan yar tway ka ,, tway set let nae so lo,,,sait hte ta kal ma kg par...
arr tinn lite,, uu pyit khar pyu lite ta hle sii lote pau ,,Ko say htoo yel,,nau
Jun 24, 2009, 1:11:00 AM